AulaGEO, iyo yakanyanya kosi inopa kune Geo-engineering nyanzvi
AulaGEO chirongwa chekudzidzisa, chakavakirwa pachimiro cheGeo-engineering, ine modular block mune yeGeospatial, Injiniya uye Mashandiro akateedzana. Iyo dhizaini dhizaini yakavakirwa pa "Nyanzvi Kosi", yakanangana nehunyanzvi; Zvinoreva kuti ivo vanotarisa pakuita, vachiita iwo mabasa pazviitiko zvinoshanda, kunyanya imwechete purojekiti mamiriro uye ...
AutoCAD-AutoDesk, Cartography, Cadastre, Kudzidzisa CAD / GIS, Engineering, qgis
Geographic Ruzivo MaSystem: 30 mavhidhiyo ekudzidzisa
Iyo yemukati geolocation mune zvese zvatinoita, tichishandisa zvigadzirwa zvemagetsi, zvaita kuti GIS ibudise kukurumidza kushandisa mazuva ese. Makore makumi matatu apfuura, kutaura nezve kurongeka, nzira kana mepu yaive nyaya yezvinhu. Inoshandiswa chete nenyanzvi dzekupenda mifananidzo kana vashanyi vasingakwanise kuita vasina ...
AutoCAD Mepu Bentley Systems Cadastre uswa FreeCAD My geofumadas
Kudzidzisa CAD / GIS, Geospatial - GIS, kuororwa
Linux ane itsva chizvarwa chishandiswa CAD
Kusiyana nenzvimbo yeGeospatial uko Open Source kunyorera kunoshanda kune avo vane hupfumi, takaona shoma kwazvo software yemahara yeCAD kunze kweiyo LibreCAD chirongwa icho chiine nzira refu yekufamba. Kunyangwe Blender chishandiso chakasimba, maitiro ayo ndeyekupopota kwete kuCAD yakashandiswa kuUinjiniya, ...
LibreCAD pakupedzisira tichava vakasununguka CAD
Ini ndoda kutanga nekujekesa kuti hazvina kufanana kutaura mahara CAD pane yemahara CAD asi ese mazwi ari mune anowanzoitika kutsvaga kweGoogle kwakabatana neshoko rekuti CAD. Zvichienderana nerudzi rwemushandisi, musimboti wekudhirowa mushandisi anofunga nezve kuwanikwa kwayo pasina kuita rezinesi kubhadhara kana muyedzo wekupamba uye ...
AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD, kuororwa
QCad, AutoCAD nzira nokuda Linux uye Mac
Sekuziva kwedu, AutoCAD inogona kumhanya muLinux paWine kana Citrix, asi panguva ino ini ndicharatidza chishandiso chinogona kuve yakachipa-inodhura mhinduro yeLinux, Windows neMac.Iyo QCad, mhinduro yakagadziriswa neRibbonSoft kubva 1999 uye panguva ino yasvika kukura zvakakwana se ...
Makosi eseArcGIS makosiBIM Architecture MakosiCivil Courses 3DBIM Electromechanics CoursesBIM Zvivakwa MakosiETABS makosiRevit coursesQGIS makosi
#BIM - Yakazara kosi yeBIM nzira
In ichi chepamberi kosi ndinokuratidza nhanho nhanho maitiro ekushandisa iyo BIM nzira mune mapurojekiti nemasangano. Kusanganisira ma module ...
#BIM - Autodesk Dzokorora Kosi - yakapusa
Izvo zviri nyore sekuona nyanzvi ichigadzira imba - yakatsanangurwa nhanho nedanho Dzidza AutoDesk Dzokorora nenzira iri nyore ....
#BIM - Yakagadzirwa Kosi Course uchishandisa AutoDesk Robot Stosition
Mepu yemahombekombe egungwa inokwira neSentinel-6
Basa Ringavepo reGIS muCOBV-19 Vaccine Distribution
Mumiririri wenzvimbo yacho mune zororo zororo
Otomatiki chivakwa chidimbu LOD2